Ny singa fototra Varistor famotsorana entona fantsona fanafoanana diode kenda coil 1/4 halavan'ny onjam-peo fohy fitetezam-paritra fanaparitahana hantsana fanasokajiana fiarovana
nataon'ny admin tamin'ny 25-11-21
Surge protector, antsoina koa hoe mpiaro ny tselatra, dia fitaovana elektronika izay manome fiarovana fiarovana ho an'ny fitaovana elektronika isan-karazany, fitaovana ary zotram-pifandraisana.
Fampidirana ny endrik'i Surge Protector amin'ny Surge Protector Surge Protector Performance
nataon'ny admin tamin'ny 20-11-21
Fampidirana ny Surge Curge dia manondro ny onjan'ny tampon'isa na ny tondra-drano be loatra izay lehibe lavitra noho ny rivo-piainana tsy miovaova ateraky ny fotoana hiverenan'ny herinaratra na rehefa tsy ara-dalàna ny faritra. amin'izao fotoana izao ...
Ny fanangonana fahalalana ara-jeografika momba ny tselatra sy ny tselatra dia tsy misy ifandraisany amin'ny voadin'ny lehilahy
nataon'ny admin tamin'ny 17-11-21
Inona no atao hoe kotroka? Rehefa avy ny orana dia tsara na ratsy ny rahona eny amin'ny lanitra. Rehefa mifankahita ireo rahona roa ireo, dia hamoaka tselatra sy hafanana be izy ireo amin’ny fotoana iray, hanafana sy hanitatra ny rivotra manodidina. Ny rivotra mafana sy miitatra avy hatrany dia hanosika ny rivotra manodidina, ka miteraka s...
Ahoana ny fametrahana ny tselatra arrester an-trano?
nataon'ny admin tamin'ny 06-07-21
Vao haingana, maro ny mpiserasera no nametra-panontaniana momba ny fametrahana fitaovana fiarovana amin'ny tselatra ao amin'ny fianakaviany. Hoy izy ireo: mila mametraka fitaovana fiarovana amin'ny tselatra ao anaty boaty fizarana ao an-trano ve ianao? Raha mila ampiana ianao, karazana fitaovana inona no tokony hofidinao ary ahoana...
Fiarovana amin'ny tselatra ao an-trano: fomba hifidianana fitaovana fiarovana amin'ny firongatry ny trano
Tena ilaina ve ny mametraka fitaovana fiarovana amin'ny firongatry ny fisondrotana ao an-trano? Mino aho fa maro ny olona hanana fanontaniana toy izany. Ny zava-misy dia nanaporofo fa mahazatra ny fianakaviana amin'izao fotoana izao ny lozam-pifamoivoizana, ka maika ny fametrahana fitaovana fiarovana. Amin’izao fotoana izao, betsaka ny...
Ny fiarovana ny tselatra maoderina dia tsy mampiasa tselatra fotsiny, fa mandroso amin'ny fotoana ihany koa!
Ao amin'ny fiaraha-monina maoderina, ny tanàn-dehibe dia lasa fironana, ny trano avo dia avo, ny trano ipetrahanay dia miha-mitombo hatrany, ary ny vokatra elektronika dia miha-malaza. Saingy amin'ity dingana ity, ny fiarovana ny tselatra dia matetika tsy noraharahian'ny vahoaka. ...